Algeria oo ku guuleysatay koobka Carabta – Radio Muqdisho
Algeria ayaa ku guuleysatay koobka Carabta ee lagu qabtay dalka Qatar.
Xulka Qaranka Algeria ayaa 2 iyo 0 ugu awood yeeshay dhiggooda Tunisia., waxaana Cìyaarta oo 90 daqiiqo loogu tala galay kusoo dhamaatay gool la’aan waxaana lagu daray 30 daqiiiqo oo dheeraad ah, taas oo keentay in ciyaartooyda Algeria dhaliyaan 2 gool.
Waana marki ugu horeyay ee Algeria hanato koobkaan.
Koobkaan oo caawa la soo gabagabeeyay ayaa waxaa kaalinta koowaad galay Algeria halka ay kaalinta labaad iyo seddexaad kala gallen wadamada Tunisia Qatar.
Waxaa xusid mudan in dalka Soomaaliya kusoo haray is reeb reebka koobkaan kadib markii uu guul darro kala kulmay Xulka dalka Cummaan.
Xulka Degmada Warta Nabadda oo u gudbay wareegga afar dhamaadka tartanka “SAWIRRO”